Hälsobesök på BVC vid 18 månader - somaliska
Hälsobesök på BVC vid 18 månader - somaliskaThe content concerns Västra Götaland
Waxaa caadi ah in laga hadlo caadooyinka cuntada, ciyaarta iyo in la wada jiro. Waxaa haboon in la abuuro caadooyinka la xidhiidh cuntada iyo dhaqdhaqaaqa wakhti hore maadaama ay saameyn ku yeelan doonto xaalada caafimaad ee ilmaha ee noolashiisa oo dhan. Waxaa jira fursad lagaga hadli karo waxyaabo ay ka mid yihiin macnaha i waalid la noqdo, nolol maalmeedka qoyska, sida uu yahay ilmuhu muddada uu ku suganyahay dugsiga xanaanada carruurta cuntada ilmaha iyo nabdgalyada ilmaha.
Waxaa aad la shaeekeysan doontaa isla markaana waad la ciyaari doontaa ilmaha, kalkaalisda caafimaadku waxaa ay u fiisan doonta sida uu ilmuhu u dhaqdhaqaaqayo sida uu ilmaha u ciyaarayo iyo sida uu dadka ula sameynayo xidhiidhka. Sidoo kale waa la baadhi doonaa Imaha, la miisaami doonaa isla markaana waa la cabiri doonaa.
Kulanka booqashada waxaa la siin doonaa talaalka lidka ku ah Jadeecada, qaamo-qashiirka, Jadeeco la mood/jadeeco jarmal. Booqashada ka hor waxaa kula gudboon ka waalid ahaan in aad u diyaar garowda isla markaana aad u sheegto arimo ku saabsan waxa dhici doona iyo in uu soo cunteeyo isla markaana dareemayo faraxad. Marka la siinayo talaalka waxaa haboon in uu ilmuhu ku fadhiyo dhabta waalidkiisa isla markaana lagu mashquuliyo wax kale, tusaale ahaan alaabta ay carruurtu ku ciyaarto si uusan u dareemin xanuunka talaalka. Ka waalid ahaan waxaa tahay xasiloonida ilmahaaga. Haddii shaki kaa galo talaalka ama aad welwesho ka hor talaalka waxaa aad la hadli kartaa kalkaalisada caafimaadka ee ka shaqeysa rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC.
Waxaa haboon in aad u diyaar gareyso kulnaka booqashada ka hor adiga oo adeegsanaya sawiro muujinaya marxaladaha kala duwan
Ku soo dhawoow kulanka booqasha rugta daryeelak caafimaadka dhalaanka BVC marka uu ilmuhu jiro 18- bilood
Fadlan fiiro sawirada muujinaya waxyaabaha dhacaya marka la soo booqdo rugta daryeelka caafimaadka carruurta BVC ka hor booqashada. Waxaa aad halkan ka arki kartaa waxyaabaha kala duwan ee dhici doona muddada lagu gudo jiro booqashada. Waxaa fiican in adiga iyo ilmahuba aad ogtihiin waxa dhaci doona isla markaana aad diyaar u tihiin.
Waxaa fiican in soo qaadato buuga caafimaadka marka aad soo booqaneyso rugta
Waxaa aad si wadajir ah uga hadli doontaan arimo ku saabsan xaalada caafimaad ee ilmahaaga iyo koritaankiisa iyo haddii aad wax su’aalo ah qabto.
looxaan la is dul saarayo
Ilmuhu waxaa dhis doonaa munaarad looxaan ah.
Muddada uu ilmuhu wax dhisayo waxaa ay kalkaalisada caafimaadku fiirin doontaa hirumarka xagga dhaqdhaqaaqa ee ilmaha.
Wax buu sawiri doonaa ilmuhu isaga oo isticmaalaya tamaashiir/jeeso. Muddada uu ilmuhu wax sawirayo waxaa ay kalkaalisada caafimaadku fiirin doontaa hirumarka xagga dhaqdhaqaaqa ee ilmaha.
Tilmaan xubno ka mid ah jidhka
Waxaa uu ilmuhu tilmaami doonaa xubno jidhkiis ka mid ah ama madaamad/boonbalo.
Dharka ayuu iska bixin doonaa
Waxaa lagu sameyn doonaa baadhitaan ilmaha jidhkiisa isaga oo aan xidhneyn wax dhar ah.
Kalkaalisada caafimaadku waxaa ay miisaami doonta missanka ilmaha isla markaana waxaa ay cabiri doonatainta uu dhererkamilmuhu dhanyahay.
Kalkaalisada caafimaadku waxaa ay cabiri doontaa dhumucda madaxa.
Kulanka booqashada waxaa la siin doona ilmaha talaalka lidka ku ah Jadeecada,
qaamo-qashiirka, Jadeeco la mood/jadeeco jarmal.
Marka la siinayo talaalka waxaa haboon in uu ilmuhu ku fadhiyo dhabta waalidkiisa. Waxaa lagu mashquulin karaa ilamaha marka la talaalayo xumbo saabuun (såpbubblor) ama alaabta ay carruurtu ku ciyaarto si uusan u dareemin xanuunka talaalka.
Marka la duro ka dib waxaa lagu dhejin doonaa ilmaha sharooto/balastar. Haddii uu ooyo ilmuhu waxaa fiican in aad aamusiiso ama aad sasabto
Marka uu kulanka booqashadu dhamaado. Waxaa la idin siin doonaa balan kulanka soo socda markaas oo uu ilmuhu noqon doono 2½ sano. Haddii aad dareento in aad u baahantahay isla markaana aad rabto waxaa aad qabsan kartaa balan kaas ka horeeya.
Halkan ka akhri macluumaad dheeri ah oo ku saabsan cuntooyika carruurta yaryar ee u dhaxeysa 1-2 sano (svenska)
Halkan ka akhri macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida loogu diyaar garoobo talaalka ka hor (svenska)
Halkan ka akhri macluumaad dheeri ah oo ku saabsan macluumaadka talaalka ee hay’ada caafimaadka bulshada oo ku qoran luqaddo kala duwan